China Yekumhanyisa servo mota maski yekucheka muchina Mugadziri uye mutengesi | Naiwei
Yekumhanyisa kumhanyisa, kucheka uye kugadzira masiki muchina, inotora iyo ultrasonic tekinoroji kusungira 3 kusvika ku5 matete ePP isina kusukwa machira, kurongedza mhuno bhiriji, uye kucheka nzira yekubuda maski muviri. Muchina unosanganisira isina kurukwa nzira yekudyisa, crease inoumba mashandiro, mhino zambuko yekudyisa mashini, ultrasonic kutenderera mashandiro. Mhuno zambuko ichipinza zvoga Iyo dhizaini dhizaini yemuchina uyu: yakapusa uye isinganetsi kushandisa, yakagadzikana uye yakavimbika, inomhanya, ine kugona kuita zvakawanda, kuenderana, uye mutengo kuita.
2. Midziyo yemidziyo
A. Raw zvinhu zvemakanika akamedura kudzora zvinhu makakatanwa kudzora, kukwirira kugadzikana uye pasi kudzikira chiyero.
B. Chigadzirwa chinoburitsa chine otomatiki kuverenga basa kuti iite kuti zviverengero zvinobuda.
C. Inogona kuburitsa zvidimbu zviviri kusvika zvishanu.
D.Computer chirongwa chinodzora, chakanyanya kukwirira kuburitsa uye zvakanyanya kukwirira kuvimbika. Zvigadzirwa zvakagadzirwa zvine mutsigo uye mhando inosangana zvizere kana kudarika muyero wekuyedza.
E. Raw zvigadzirwa zvinodzorwa neyakagadziriswa mabhureki kudzora zvinhu kunetsekana kudzora
F. Computer program control inoita kuti goho rive rakatsiga uye rakaringana
G. Zvese zvakagadzirwa-zvinyorwa zvinokodzera kuongororwa zvakajairwa kana zvakapfuura uye zvakasvibirira zvinhu zvinoponesa zvinopfuura makumi matatu muzana, mutengo wakaderera uye kugona kwakanyanya kunoitwa.
H. Seti mbiri dze nzeve tambo michina, kutora dhonza-mhando chimiro, uye seti ye roller yekuisa chisimbiso mashandiro.
Raw zvinhu rack, yemhino bhiriji kurodha,
Mask yekucheka muchina,
Izvo zvinorambidzwa kubata iyo ultrasonic transducer ine yakakwira voltage. Kudhinda
vhiri uye kufa musoro haugone kuve overvoltage, zvinozokuvadza musoro wekufa.
Pashure: Semiauto servo mota earloop yekutengesa muchina
Zvadaro: Imwe yekudhonza imwe servo mota yekunze earloop otomatiki mask yekugadzira muchina
Yekumhanyisa servo mota maski yekucheka muchina
Servo Motor Mask Mashini